Ibhlog | Ucanzibe 2022
Ngaba ungayipeyinta iSatinwood ngaphezulu kweglosi?
Ngamanye amaxesha, xa kuthengwa indlu, ngakumbi ukuba ayintshanga, abantu bakhetha ukupeyinta kwiindawo ezicwebezelayo. Ukugqitywa kwepeyinti ekhazimlisiweyo kwakudume kakhulu ekupheleni kweNkulungwane ye-20, ngoko ke izindlu ezininzi zisenazo iintsalela zokukhanya kwempembelelo ephezulu. Ungafuna ukuthontsiza oku. ISatinwood yinto entle ...
Isikhokelo sam sePeyinti
Siphonononga amawaka eemveliso zepeyinti kunye nezixhobo e-UK ukufumana eyona ndlela ilungileyo ngexabiso elifanelekileyo.
Ngaba ungayipeyinta iPebbledash?
Ndiza kunyaniseka, ukupeyinta i-pebbledash ngomnye weyona misebenzi ndiyithandayo. Umphezulu we-porous uthetha ukuba naxa usebenzisa i-roller ende yemfumba usazabalaza ukufumana eyona nto iphezulu kwipeyinti yakho. Oku kukwathetha ukuba kuya kufuneka wenze ucofo olungaphezulu kunesiqhelo. Ngoko ungapeyinta ...
Upeyinta njani ucango lwegaraji
Landela isikhokelo sethu sendlela yokupeyinta umnyango wegaraji ukuze uqiniseke ukuba ipeyinti yakho ayihlali nje ixesha elide kangangoko kodwa ibonakala intle kakhulu.
Ngaba ungapeyinta ucingo ngeRola?
Ungapeyinta ucingo ngerola? Ziziphi iingenelo kunye nokubi ukuba uyazenza? Fumana kwisikhokelo sethu esiqinisekileyo.
Ingcebiso Kwabo Baqala Ishishini Lokupeyinta
Lo bhubhani ubonakala urhubuluza ukuya esiphelweni, ishishini libuyile etafileni. Kwiinyanga ezimbalwa ezizayo i-UK kufuneka ibone amawaka abantu abafuna ukuqala ishishini labo lokupeyinta kwaye uninzi lwabo luya kukhangela iingcebiso. Ngale nto engqondweni, sigqibe kwelokuba sibuze abapeyinti abahlonitshwayo ...
Ngaba Ukuba Ngumhombi kubutshintshe Ubomi Bakho baBungcono?
Ishishini lokupeyinta kunye nokuhombisa lihlala lifakwe kakubi - isiqingatha sazo ngabapeyinti kunye nabahlobisi ngokwabo. Nokuba kukuqala kwangethuba, abathengi abakrwada okanye iintlungu zomzimba kunye neentlungu - ukuba ngumhombi yenye yeendlela ezingentle kangako umntu anokuzikhetha. Kodwa ngaba ngenene kubi ngolo hlobo? Yenza i...
Ipeyinti yoMgangatho wegaraji: Imibuzo yakho, iphendulwe
Sithathe eyona mibuzo idla ngokubuzwa malunga nepeyinti yomgangatho wegaraji kwaye sibeke zonke iimpendulo kwisixhobo esinye esiluncedo.
Ngaba iFarrow kunye neBhola zifanelekile?
UFarrow kunye neBhola bathengisa ibhrendi yabo njengamagcisa epeyinti kunye nephepha, athengisa umgangatho ophezulu, iimveliso zomyili eziqaphela isitayile kunye ne-eco-aware. Ngephalethi engaphezulu kwe-130 yee-shades, iFarrow kunye neBhola zibonelela ngoluhlu olubanzi nolukhethekileyo lokukhetha imibala. Ukuduma kwebrendi kuyaqhubeka ukukhula kwaye unokufumana uluhlu lwemveliso ...
Uyisusa Njani Ipeyinti ekhazimlayo
Ngaba uyazibuza ukuba ungayisusa njani ipeyinti yeglosi? Landela isikhokelo sethu esiluncedo esikubonisa iindlela ezimbini onokuzisebenzisa.
Esona sitshizi sePeyinti e-UK 
Iingcali zethu zepeyinti zikhethe esona sitshizi sepeyinti e-UK esekwe kumawaka ophononongo kunye novavanyo lwethu olucokisekileyo.
Eyona peyinti yefanitshala egqwesileyo e-UK 
Iingcali zethu zepeyinti zikhethe eyona peyinti yefenitshala ibalaseleyo e-UK esekwe kumawaka ophononongo kunye novavanyo lwethu olucokisekileyo.
Ukupeyinta iiBannister kunye ne-Staircase Spindles [IsiKhokelo esiQiqiweyo]
Ukupeyinta izinyuko zezinyuko kunye nokusonta kunokuba ngumsebenzi onomvuzo nowanelisayo xa ugqityiwe, kodwa unzima kwaye utya ixesha ukuwugqiba. Ngelishwa, ngumsebenzi othatha inkathalo kunye nexesha. Ngethamsanqa, abapeyinti kunye nabathandi bokuzonwabisa (bonke abaye bafunda ngokuzama kunye neempazamo) baye baqokelela kwaye babelane ngemibono kunye neengcebiso kwi-intanethi ixesha elithile. Oku kubhaliwe ...
Yeyiphi eyona nto inzima ngokuba ngumhombisi?
Sabuza abapeyinti abaqeqeshiweyo abali-18 nabahombisi ukuba yintoni abacinga ukuba yeyona nto inzima ngokuba ngumzobi.
Ngaba ufanele usebenzise ipeyinti yesilika kwiindonga zakho?
Ngaba kufuneka usebenzise ipeyinti yesilika kwiindonga zakho? Lo ngumbuzo esihlala sibuzwa ngabaxumi bethu. Ngelixa imeko yangoku iyalela ukuba usebenzise i-matt emulsion ukuze ufumane inkangeleko entle kunye nokugqiba, kusekho ezinye iibrendi ezivelisa ipeyinti yesilika ukuze abantu bayisebenzise ngaphakathi ...
I-Q&A: Ipeyinti yeThayile
Ngaba ipeyinti yethayile iyasebenza? Yomelele kangakanani? Fumana impendulo yale mibuzo kunye nokunye kwi-tile yethu yepeyinti ye-Q & A guide.
Q&A: Ukutshiza ipeyinti
Senze esona sikhokelo siphambili kuzo zonke izinto zokutshiza ipeyinti kubandakanya iingcebiso, iingcebiso kunye neempendulo kwimibuzo eqhelekileyo.
Uphononongo lwePaint kaJohnstone
Ukuba ujonge uphononongo lwePaint kaJohnstone, ufikile kwindawo elungileyo. Kuwo onke amanqaku ethu kwiSikhokelo sam sePaint, siye saphonononga iipeyinti ezininzi ezahlukeneyo kwaye iiPaints zikaJohnstone zibonakala kakhulu ngenxa yomgangatho wokwenziwa kwazo. Ngezantsi ungafumana uphononongo olwahlukeneyo lukaJohnstone's Paints, zonke kwindawo enye. Imixholo ifihla iGadi kaJohnstone's ...
Ipeyinti yeMat okanye yeSilika kwigumbi lokulala?
Ukuba ucinga ngokudweba igumbi lakho lokulala, unokuzibuza: ngaba ukhetha i-emulsion ye-matt okanye i-emulsion yesilika? Kwinqaku lanamhlanje, siza kuxubusha ukuba yeyiphi ekufuneka uye kuyo kwaye ngoba. Ke ngoku kuthethiweyo, masitsibe kanye ngaphakathi. Iziqulatho zifihla i-1 Mat okanye iSilk Paint yeBedroom? 2 1...
Ithetha ntoni i-888 kumanani eengelosi
Ithetha ntoni i-10/10
11:11 ukubhula ngamanani
Kutheni ndiqhubeka ndibona i-911
Ithetha ukuthini xa ubona i-11: 11
Ithetha ntoni 4 10